Dagaalada ka Dhacay Puntland, Yaa ka Dambeeya? – Rasaasa News
Jul 27, 2010 Dagaalada ka Dhacay Puntland, ethiopia, Ogaden, ONLF, Yaa ka Dambeeya?
Waxaa muddo socday isxulafaysi dhexmarayay saraakiil, ka tirsanaan jiray dawladii buburtay ee Somaliya iyo rag caan ku noday dagaal Oogenimo, oo awal hore ku kala jiray ururo siyaasadeed oo kala dano ah, maantase aad moodo in ay haldan yeesheen, ka dib kolkii uu ururka ONLF, wadahadal nabadeed la galay dawlada Itobiya.
saraakiishan oo ku fashilmay siyaasadii ay awal hore ugu jireen ayaa hada u muuqda in ay qaadanayaan nidaam cusub, oo ay ugu yeedheen “dhibaatada Somaliya waa Itobiya.” Waxaa dhab ah in saraakiishani ayna wadin dan Somaliyeed, laakiin ay ujeedadoodu tahay in ay sii kordhiyaan dhibaatada haysata Somaliya oo ah siyaasiyiinta maalinba meel ka buskiciya.
Bishii May 2010, waxaa magaalada Osla ka dhacay shir, loogu yeedhay waxyeelada Itobiya ee wadanka Somaliya, waxaa shirkan abaabulay Jwxo-shiil, oo kolkii uu ku fashilmay gudaha dhulka Somalida Ogadeeniya doorbiday in uu xasarad ka soo abaabulo dalka Somaliya, isaga oo dib ugu noday wixii uu ahaa jiray 20 sano ka hor [Somali Janral].
Waxaa shirkaas xigay shir kale oo July 17, 2010, uu damacsanaa in uu ku qabto London. Shirkaas goobtii uu ka dhici lahaa waxaa joojiyey dad uu Jwxo-shiil, dambiyo ka galay, waxaase marti galiyey si uusan shirkaasi u baaqan Beel ka mid ah Beelaha ku Riti kacsanay Jwxo-shiil, ee Sade Mareexaan.
Shirkaas waxaa ka soo qayb galay saraakiil iyo siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen Jwxo-shiil, Cabdiqaadir Xaaji Masale iyo dagaal Ooge Xuseen Maxamed Caydiid, oo saddexdooduba ay ka tirsan yihiin urur Somaliyeed oo lagu aas aasay Norway.
Saraakiishan, ayaa waxay wada shaqayni ka dhaxaysaa ururka xag jirka ah ee Alshabaab, oo isagu dhibaatooyin badan ka wada gudaha dalka Somaliya.
Qorashaha ay wadaan saraakiishani ayaa ah, in kolka hore qalalaase laga abuuro dawlad gabaleedka Puntland iyada oo la marayo qorshe saddex gees ah. Dagaalka maanta k bilowday Puntland waa qayb ka mid ah qorsheyaasha ay maleegeen ragaas iyaga iyo taageerayaashoodu, koldhawna waxaynu arkidoonaa sida loo fashiliyo, waayo Puntland ayaa dirba ka hortagtay.
Qorshahan ayaa waxaa ka mid ah; Maamul gabaleedka Gal-mudug uu qaabilo saadka iyo hubka, waxaana wakiil u ah Xuseen Maxamed Caydiid, Gal-mudug waxay u shaqayn si hoose oo ayna ismuujinaynin si ay uga fogaato caadifad qabiil. Ujeedada Gal-mudug iyo Xuseen Caydiid, waa in ayna dawlada Somaliya hanaqaadin, maadaama ay siyaasiyiinta beesha Habar-gidir u badan yihiin Wadaado Diimeed sidaasna ku helaan xukunka Somaliya nidaam Diini ah.
Sade Maxeerxan oo ay waligoodba isku dhinac yihiin Habar-gidir, waxay si cad u taageeri ONLF, garabka guuldaraystay ee Jwxo-shiil, iyaga oo iska dhigaya dad ka xun burburka ku yimid halganka ay waday ONLF, kana soo horjeedsanaya wadahadalka nabada. Ujeedadoodu waxaa weeye in ayna Absame iyo Itobiya is fahmin, hadii ay is fahmaana Mareexaan waxba umayaal gabalada Jubooyinka, oo la filayo xiliyada soo socda in uu galo gacanta dawlada Somaliya.
Jwxo-shiil, Ogadeenka inta isaga taageersan, waxay ka qayb gali qalalaasaha laga samaynayo Puntland, waana la qabqaban dabadeedna dib baa loogu celin gabalka Ogadeen. Arintaas Jwxo-shiil, ayaa u isticmaalidoona borobagaando, si uu u helo taageerada uu lumyey ee Ogadeenka, uguna guulaysto carqaladaynta nabada uu wado ururka ONLF. Ujeedadiisu waa uun xukun jacayl ee ma ay jirto dan guud oo Ogadeen oo uu wado.
Saddexdan danaysi oo mid waliba isleeyahay, hadii ay arimuhu sidaas u dhacaan ujeedadaada ayaa kuu fulidoonta. Saddexdooduba waxay ka soo horjeedaan wadahadalka nabada ee ONLF iyo Itobiya, oo ay isleeyihiin hadii uu guulaysato danihiina ayuu ka hor iman.
Runtii hadii uu wadhadalka nabadu guulaysto dad bay dan wayni ugu jirtaa dadkaasina waa Absamaha oo awal hore meel walba ku qatanaa, dagaalo iyo dhibaatooyina ay daris lahaayeen 17 sano ee ina dhaafay.
Waxaan isleeyahay Absame waxaa maanta la gudboon in ay difaacdaan nabadaas ay wada galeen dawlada Itobiya iyo ururka ONLF, cid alaale cidii ka hortimaadana in ay iska celiyaan iyaga oo danahooda ilaashanaya.